by Subhamoy Das kunye noManoj Sadasivan
I-Vedas ibhekwa njengengxelo yokuqala yombhalo we- Indo-Aryan impucuko kunye neencwadi ezininzi ezingcwele zaseIndiya . Ziyizibhalo zokuqala zeemfundiso zamaHindu , ezineenkcukacha zokomoya ezibandakanya zonke iinkalo zobomi. Iimfundiso zefilosofi zeencwadi zeVedic ziye zazama ukuvavanya ixesha, kwaye iiVedas zenza igunya eliphezulu lezenkolo kuzo zonke iinkalo zobuHindu kwaye ziyimithombo ehloniphekileyo yobulumko kuluntu ngokubanzi.
Igama elithi Veda lithetha ubulumko, ulwazi okanye umbono, kwaye usebenza ukubonakalisa ulwimi loothixo ekuthetha ngentetho. Imithetho ye-Vedas ilawula i-social, legal, domestic and religious traditions of Hindus kuze kube namhlanje. Yonke imisebenzi enyanzelekileyo yamaHindu ekuzalweni, umtshato, ukufa njl. Zikhokelwa yimveli yeVedic.
Kunzima ukusho xa iziqephu zokuqala zeVedas zikhona, kodwa kubonakala kucace ukuba ziphakathi kweencwadi zokuqala ezibhalwe ngobulumko ezibhalwe ngabantu. Njengoko amaHindu asendulo ayengagcinanga naluphi na umlando weenkcukacha zabo zonqulo, olwabhaliweyo kunye nezopolitiko, kunzima ukuchonga ixesha leVedas ngokuchanekileyo. Izazi-mlando zisinika ezininzi zokuqikelela kodwa akukho nanye ziqinisekisiwe ukuba zichanekile. Kodwa kucingelwa ukuba i-Vegas yokuqala ingabuyela emva kwe-1700 BCE-i-Bronze Age.
Ngubani obhala iVedas?
Inkolelo kukuba abantu abazange babhale iingoma ezihloniphekileyo zeVedas, kodwa ukuba uThixo wafundisa iingoma zeVedic kwiingqondi, owathi wazinikela ngezizukulwana ngamazwi ngomlomo.
Esinye isithethe sikhombisa ukuba iingoma "zazibonakalisiwe," kwiingqondi, ezaziwa ngokuba ngaboni okanye "i-mantradrasta" yeengoma. Amaxwebhu asemthethweni aseVedas ayenziwe ngokukodwa nguVasasa Krishna Dwaipayana malunga nexesha likaNkosi Krishna (u-1500 BC)
I-Vedas ihlelwa kwimivalo emine: i-Rig-Veda, i-Sama Veda, i-Yajur Veda ne-Atharva Veda, kunye ne-Rig Veda ekhonza njengombhalo oyintloko.
IiVedas ezine zibizwa ngokuba yi "Chathurveda," apho ezintathu zokuqala zeVedas - Rig Veda, iSama Veda, neYajur Veda - ziyavumelana omnye kwifom, ulwimi kunye nomxholo.
I-Veda ngayinye inamalungu amane - i- Samhitas (iingoma), i- Brahmanas (izithethe), i- Aranyakas (i-theologies) ne- Upanishads (ifilosofi). Ukuqokelela kweemantras okanye iingoma kuthiwa yiSamhita.
I-Brahmanas yimixholo yenkcubeko equka imiyalelo kunye nemisebenzi yenkolo. I-Veda ngayinye ineBrahmanas eziliqela.
I-Aryanyakas (itekisi yehlathi) ihlose ukukhonza njengezinto zokucamngca ngabantu abahlala emahlathini baze bahlangabezane neengcinga kunye nekiso.
I-Upanishads yakha iziqephu zokugqibela zeVeda kwaye ngoko kuthiwa yi "Vedanta" okanye ekupheleni kweVeda. I-Upanishads iqulethe imfundiso yeVedic .
Unina weZibhalo zonke
Nangona iVedas ayifundwa okanye ayayiqonda ngokuqhelekileyo namhlanje, nangona bazinikeleyo, ngokuqinisekileyo bayakha inxalenye yecawa yonqulo okanye "iSanatana Dharma" ukuba bonke abaHindu balandele. U- Upanishads, nangona kunjalo, afundwa ngabafundi abanobuchule benkolelo yonqulo kunye nookomoya kuzo zonke iimeko kwaye babonwa njengemigaqo-siseko ngaphakathi kwimizimba yobulumko bentlalo yabantu.
I-Vedas iholele ulwalathiso lwethu lonqulo kangangeminyaka kwaye liya kuqhubeka ukwenza njalo kwizizukulwana ezizayo. Kwaye ziya kuhlala zihlala zihlala ziphela kwaye ziphela zonke izibhalo zamaHindu zasendulo.
Emva koko, makhe sibheke kwiVedas ezine ngabanye,
"Enye Inyaniso iimboni zibizwa ngokuba ngamagama amaninzi." ~ Rig Veda
I-Rig Veda: Incwadi yeMantra
I-Rig Veda iqoqo leengoma eziphefumlelweyo okanye iingoma kwaye ngumthombo oyintloko wolwazi kwimpucuko yeRig Vedic. Incwadi endala kunayo nayiphi na ulwimi lwase-Indo-Yurophu kwaye iqulethe uhlobo lokuqala lwawo onke amaSanskrit mantras, aqala ngo-1500 BCE-1000 BCE. Abanye abaphengululi bahlawula iRig Veda ekuqaleni kwe-12000 BCE-4000 BCE.
I-Rig-Vedic 'samhita' okanye iqoqo leemantras liqukethe ama-1017 amaculo okanye 'suktas', ephethe ama-stanzas angama-10,600, ahlukaniswe ngo-8, 'ngasinye sinama-eighya' adhayayas 'okanye izahluko, ezahlukana ngokwahlukileyo kumaqela athile. Iimvumi zingumsebenzi wabalobi abaninzi, okanye iimboni, ezibizwa ngokuthi 'rishis.' Kukho iimboni eziyisixhenxe eziziintloko ezichongiweyo: Atri, Kanwa, Vashistha, Vishwamitra, Jamadagni, Gotama kunye neBharadwaja. I-rig Veda ibonisa ngokubanzi iinkcukacha zentlalo, zonqulo, ezopolitiko kunye nezoqoqosho kwimpucuko yeRig-Vedic. Nangona i-monotheism ibonisa ezinye zeengoma ze-Rig Veda, ukukholelwa kwintando yenkolo kunye ne-monism kuyafumaneka kwiinkonzo ze- Rig Veda .
I-Sama Veda, i-Yajur Veda kunye ne-Atharva Veda yahlanganiswa emva kweminyaka yobudala beRig Veda kwaye ibhalwa kwixesha leVedic .
I-Sama Veda: Incwadi Yengoma
I-Sama Veda iqokelelo lweengoma zelwimi ('saman').
Iimvumi kwi-Sama Veda, ezisetyenziswe njengamanqaku omculo, ziphantse zikhishwe kwiRig Veda kwaye zingenalo zifundo ezahlukileyo. Ngenxa yoko, isicatshulwa sayo siyingcipheko ye-Rig Veda. Njengomfundi weVedic uDavid Frawley uthi, ukuba i-Rig Veda lizwi, iSama Veda ingoma okanye intsingiselo; Ukuba i-Rig Veda ingolwazi, i-Sama Veda iyayiqonda; Ukuba uRig Veda ungumfazi, uSama Veda ungumyeni wakhe.
I-Yajur Veda: Incwadi Yesiko
I-Yajur Veda nayo iqokelelwa ngamatoriki kwaye yenzelwa ukuhlangabezana neemfuno zenkonzo yonqulo. I-Yajur Veda yayikhonze njengencwadi ekhokelayo yababingeleli abaqhuba izibingelelo ngelixa bexubana kunye nemithandazo yeprose kunye neempompo zesibingelelo ('yajus'). Kufana neYiputa ye "Yincwadi yabafileyo."
Kukho ukugqithiselwa okugqibeleleyo kwee-6 zeYajur Veda - iMadyandina, i-Kanva, iTaittiriya, iKathaka, iMaitrayani ne-Kapishthala.
I-Atharva Veda: Incwadi yePela
Okokugqibela kweVedas, oku kuhluke ngokupheleleyo kwezinye i-Vedas ezintathu kwaye ngokulandelayo kubaluleke kakhulu kwiRig Veda ngokuphathelele imbali kunye noluntu. Umoya ohlukileyo ujikeleza kule Veda. Iimvumi zayo zintlobo eyahlukileyo kuneRig Veda kwaye zilula ngolwimi. Enyanisweni, abaphengululi abaninzi abaziboni njengengxenye yeVedas. I-Atharva Veda iqulethe iincwadana kunye neentshukumo ezixhaphakileyo ngexesha layo, kwaye ibonisa umfanekiso ocacileyo we-Vedic society.
Kutheni Ukholelwa KwiHoli?
2017 Ikhalenda yamaHindu, iMidlo, kunye neZenzo zeNkolo
Iintlobo ze-Hindu Marriage in the Laws of Manu
Iingoma eziphezulu ezingama-40 zamaKristu zika-2014
Iingcamango zesiLwimi zesiJamani: I-Tun (Ukwenza)